जिम गर्न क्लब छिरेका दावामाथि गोली प्रहार » खबरहरुको एउटै केन्द्र
जिम गर्न क्लब छिरेका दावामाथि गोली प्रहार
मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५० मा प्रकाशित !
२९ चैत, काठमाडौं । गुन्डा नाइके दावा लामामाथि मंगलबार बिहान काठमाडौंको गौरीघाटस्थित दिव्य पार्टी प्यालेस एण्ड हस्पिटालिटीमा जिम गर्न प्रवेश गर्दै गर्दा गोली प्रहार भएको छ । काभ्रे घर भएका लामा बिहान ९ बजेर २० मिनेटमा जिम क्लब प्रवेश गर्नासाथ बाहिरबाट गोली हानिएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दावा गाडी रोकेर हाफ पाईन्ट र टिसर्टमा जिम गर्न पार्टी प्यालेसभित्र रहेको जिम हलमा प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए ।
पार्टी प्यालेसको गेटमा पुगेका बेला उनलाई पछाडीबाट आएका एक व्यक्तिले पहिलो गोली खुट्टामा हानेका थिए । एउटा खुट्टा भित्र र एउटा गेटबाहिर रहेको अवस्थामा दावाको खुट्टामा ती बाहिरबाट गोली हानेको प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि जानकारी दिएको छ । त्यसपछि दावा लरबराउँदै भुईमा ढलेपछि उनको कोखामा दुई राउण्ड गोली हानेर ती व्यक्ति भागेका थिए ।
सीसीटीभीमा देखिएको फुटेजअनुसार गोली चलाउने हरियो माक्स लगाएका थिए भने कालो झोला बाकेका थिए । पार्टी प्यालेसको परिसरमा भएको सीसीटिभी हेरेर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान थालेको छ । “नाइन एम एम पेस्तोलबाट ३ राउण्ड गोली चलेको देखिएको छ,” काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीले भने, “घाईतेको उपचार हुँदैछ, हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं ।”
PREVIOUS POST Previous post: डीअाईजी सिलवालद्वारा सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर
NEXT POST Next post: आईजीपी बनेलगत्तै प्रकाश अर्यालबाट आयो यस्तो कडा चेतावनी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र २९, २०७३ ०८:५०